Version 0.3.8 – Baaritaanka Language
December 20, 2009 by dalabyo Leave a Comment
Version Tani waxay ku darayaa ogaanshaha ee luqadaha martida website (ku saleysan gorgortan ah browser ah – geoip lagu dari karaa haddii danta ku filan la soo bandhigi doonaa). Waxa kale oo ay taageertaa `rel = canonical` cusub ee WordPress cusub (2.9) kaas oo la sii daayay shalay. Share caadiga ah bugfixes kala duwan ayaa sidoo kale halkan. Oo haddana waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo Kevin Hart oo uu caawimo.
Tani waa version la soo dhaafay si rasmi ah u taageeraan WordPress 2.7, sida aynu halkii ay ku qarash gareen doonto khayraadka ku koobnayn on horumar badan taageeraya jir saldhig code. Qof kasta oo isticmaalaya WordPress duq ah waxaan leenahay labo talooyin: 1. casriyayn. ama 2. isticmaalaan war transposh jir. Qorshaha ayaa mustaqbalka la mid noqon doontaa, mar WordPress 3.0 lagu aynu ka hoos doonaa taageero 2.8. Kasta comments on this la soo dhaweyn doonaa.
Filed Under: Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: yaryar, sii daayo, rss, WordPress 2.8, WordPress 2.9, plugin wordpress
Version 0.3.7 – Feed feed in
December 6, 2009 by dalabyo 3 Comments
Tani version cusub oo joojisey xoogga la saxo XML RSS nuujiyaan. Settings sida Pario iyo luuqadda ay hadda si sax ah loo dhigay. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Kevin Hart oo uu gargaar iyo taageero ah qodbay arrimaha kuwa. Horumar kale waxaa loo sameeyay in parser oo ka saari doonaa qaar ka mid ah weedho siyaado ah ka lagu turjumay (sida [….]).
Sida had iyo jeer – arki buuxa ee isbedel log.
Filed Under: Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: yaryar, sii daayo, rss, plugin wordpress
Version 0.2.4 – Welcome WordPress 2.8!
June 9, 2009 by dalabyo 5 Comments
Tani waxay sii daayo cusub soo dhaweeyay sii daynta soo socda ee WordPress cusub 2.8. Tan waxaa ku jira in la sii daayo taageero-qoraal ee feature ugu hooseysa 2.8 kaas oo awood u siin doona boggaga aad u cabbayso dhaqso iyo aad u hesho dhibcaha sare leh yahoo ayaa Yslow. Sidoo kale waxaa ka mid ahaa waa tan oo la rajeenayo in cayayaanka, ugu weyn waa arin ee mawduucyada in aanan shaqeyn, waxaana jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Karl oo uu caawimo ee igu tilmaamaya in jihada saxda ah. Waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Mike oo uu caawimo ee debugging dhibaato leh horgalayaal wixii ka reebay taariikh iyo istaatistikada si sax ah ka shaqeeya. Sidoo kale in la ogaado in wax quudanaya RSS luqad shisheeye in ay la shaqeeyaan hadda.
Waxaan rajaynaynaa inaad ku raaxaysato doonaa daayo this – iyo sida had iyo jeer – aragtidaada waxaan jecelahay in maqalka
Filed Under: Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: yaryar, sii daayo, rss, WordPress 2.8, plugin wordpress
Qaar ka mid ah astaamaha cusub ee 0.0.3
March 7, 2009 by dalabyo 3 Comments
Maanta waxaan sii daayo version cusub oo ku darayaa taageero for laba Tilmaamo. Mid koowaad waa kartida si aad u hesho Feeds RSS turjumay, user oo dhan u baahan yahay in la sameeyo waxa la subscribe to feed ku yaalla bogga soo turjumay.
Muujinta labaad waa hagaag ah si Qadaadka iyo turjumidda kaas oo u ogolaanaya turjumaan si uu u dhiibto ka soo qalab kombiyuutar ku heli (hadda la shaqeynta google translate) iyo u isticmaal sida caawisa oo loogu talagalay habka turjumidda.
Waxaan weli yihiin kuwo aad u furan talooyin aad, kaliya nala soo xiriir.
Update – 08/03 – Qof kasta oo la kulma dhibaatooyin rakibaadda, ilaa aan sii daayo version xiga, fadlan rakibi version 0.0.2 marka hore iyo ka badan Tahniyadaha 0.0.3
Filed Under: Software Updates Tagged Iyadoo: google turjumi, sii daayo, rss